လူ..လူ..လူ - Myanmar in Singapore
Posted by Grace on January 15, 2010 at 12:18pm
နှင်းဆီပန်းတိုင်းမှာ ဆူးရှိသလိုပေါ့။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စရိုက်မတူတော့ သည်းခံလို့ မရနိုင်တဲ့ အခါလည်း ရှိမယ်။ နှင်းဆီပန်းကို မြတ်နိုးရင် ဆူးစူး မခံရအောင်ဆိုပြီး ဆူးတွေကို ကြိုးစားပြီး မထွင်လိုက်ပါနဲ့ ဆူးစူးမခံရအောင် ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ရမယ် ဆိုတာကိုပဲ သင်ယူပါ။ Views: 60
Comment by Daewer Hein on February 7, 2010 at 2:21am လူတွေကိုဘုရားသခင်ကဘာမှမသင်ပေးပါဘူး... သင်ပေးခဲ့ရင် ဘယ်ဒီလောက်ဆောက်သုံးမကျဖြစ်နေကြမလဲနော့..း) Comment by ma san san aye on February 7, 2010 at 12:01am ever utilizations post for everybody, thanks u. Comment by aungsanlin on February 1, 2010 at 12:59pm ကိုခိုင်ဇော်မင်း ပြောသလိုဘဲ ပြောချင်တယ် ... Comment by ခိုင်ဇော်မင်း (kaung zan win) on January 16, 2010 at 2:32pm ကိုယ့်ဒဿနကိုဘုရားသခင်ရဲ့စကားအဖြစ် weight သုံးလိုက်တာပါ...ဒါပေမယ့်ဒဿနလေးကမဆိုးပါဘူး။
တချို့တွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့ဒဿနက သမ္မာကျမ်းစာထဲကဘုရားသခင်ရဲ့စကားထက်တောင်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ Comment by Daewer Hein on January 16, 2010 at 4:09am လူတချို့က သူတို့ပြေချင်တာကိုပြောဖို့ ဘာသာရေးဆွဲဆွဲထည့်ကြတယ်... ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာသူတို့ လူယုံအောင်မပြောတတ်လို့ပဲ...။ ခုကိစ္စပဲကြည့် ဘယ်သူမဆို ဘုရားသခင်အဲလိုတော့ပြောမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိနိုင်တယ်.. ဒီတော့ ဘုရားနံမယ်သုံးပီးလိမ်နေရာမကျဘူးလား... ဒီတော့ အပြစ်ကနှစ်ထပ်ကွန်းမသွားဘူးလား.... လိမ်လည်မှု(၄၂၀)ရယ် အများပိုင်ပစ္စည်းအလွဲသုံးစားပြုမှု(၆၁)ရယ်...း) Comment by Thu Thu on January 16, 2010 at 1:32am OMG Comment by Tun Nay Nwe on January 16, 2010 at 12:59am ohgod
tun Comment by ColinLynn on January 15, 2010 at 11:08pm God is Great, hor...Grace........... Comment by Daewer Hein on January 15, 2010 at 10:39pm ဘုရားသခင်အဲလောက်စကားများတာ သမ္မာကျမ်းစာတခုလုံးမှာတောင်မတွေဖူးဘူး... ဒုက္ခော။ Comment by TUN WIN on January 15, 2010 at 5:48pm Yeah ..... ‹ Previous